Dawlada UK oo saxiixa 100 kun oo qof oo Soomaali ah ku xirtey mamnuucista qaadka – SBC
Dawlada UK oo saxiixa 100 kun oo qof oo Soomaali ah ku xirtey mamnuucista qaadka
Posted by editor on Diseenbar 10, 2011 Comments
Dawlada Britain ayaa go’aan ku gaartey in hadii la helo saxiixa 100 kun oo qof oo Soomaali ah in laga mamnuuco cunista iyo ka ganacsiga qaadka wadanka UK, taasi oo ka dhalatey cadaadis balaaran ururka la dagaalanka qaadka uu saarey in la joojiyo qaadka oo dhibaato qoys, dhaqaale, bulsho iyo shakhsi ku haya ummada Soomaaliyeed.
Gudoomiyaha ururka la dagaalanka qaadka ee dalka UK Abuukar Cawaale oo xog waran kooban siiyey warbaahinta SBC ayaa sheegay in ay tahay guul u soo hoyotey shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan wadanka UK taasi oo ah in la gaarey xili dib ay u eegto dawlada Britain cabashada iyo codsiga ka soo yeeraya Bulshada Soomaaliyeed taasi oo ku aadan waxyeelada bulsho ee qaadku uu ku hayo ummada Soomaaliyeed.
Abuukar wuxuu sheegay in mudo lix sano ah ay ku qaadatey ururka uu madaxda ka yahay sidii uu uga dhaadhacin lahaa dawlada UK sidii loo joojin lahaa qaadka la keeno dalkan, isla markaana hada loo fadhiyo sidii loo joojin lahaa ganacsiga, keenista iyo cunista qaadka dalka UK.
Mr. Cawaale wuxuu sheegay in dawlada Britain ay soo saartey mareeg internet oo loogu tala galay in hadii 100 kun oo qof ay saxiixaan ololaha joojinta qaadka in gabi ahaanba la joojin doono.
Mareegtan Internet ayaa dadka looga baahan yahay inay saxiixan ay tahay dadka degan wadanka UK iyadoo qofku magaciisa iyo adrres-kiisa oo buuxa uu galinyo, ka dibna wuxuu arkaa halka uu marayaan saxiixayaasha.
Gudoomiye Cawaale wuxuu ka codsadey shacabka Soomaaliyeed ee dagan dalka UK inay ka faa’ideystaan fursadan dahabiga ah isla markaana ay codkooda ku bixiyaan sidii qaadka oo dhibaato guud ku hayo bulshada Soomaaliyeed loo joojin lahaa.
Abuukar wuxuu sheegay in hadii lagu guuleysto joojinta qaadka ay tahay fursadan dad badan Soomaali ah ka bixi lahaayeen dhibaatooyinka nolasha ka haysta, wuxuuna farta ku fiiqay in qoysas badan oo Soomaaliyeed ay ku dumeen dhibaatada ama saameynta qaadka, halka kumanaan dhalinyaro ah oo ka faa’ideysan lahaa waqtigooda qaaliga ah sida waxbarasho, shaqo ama arimo kale oo muhiim ah uu waqtigoodu ku lumay cunista qaadka.
Abuukar Cawaale wuxuu ku tilmaamay qaadka guumaysi casriga ah oo lagu maamulo dhaqaalaha iyo maskaxda ummada Soomaaliyeed kaasi oo uu sheegay in dhaqaalahooda lagu guranayo.
Hadaba hadii aad tahay qof Soomaali ah oo ka damqanaya dhibaatada dhaqaale, bulsho, qoys & qaran ee qaadku ku hayo ummadeena fadlan 2 daqiiqo sii waqtigaaga qaaliga ah oo codkaaga ku biiri ololaha joojinta qaadka dalka UK, taasi oo guul weyn u noqon doonto bulshada Soomaaliyeed.
Si aad ugu biirto olalahan oo aad codkaaga u dhiibato riix link-ga hoose.
sahal ismael saed says:
Diseenbar 10, 2011 at 4:15 pm
waa in la joojiyaa qaadka
Diseenbar 10, 2011 at 7:15 pm
Asc. Dhamaantiin.waxaan aad ugu farxay in la joogto
Daroogada qaadka. anigu waxan qabaa in la heli
doono sadex milyan oo qof oo saxeexda in la
joogto daroogaada. anigu waan saxeexay.
Rabi ah naga joogo kaas aamiin.
Diseenbar 11, 2011 at 7:33 am
Maansha Allaah.Waa guul iyo war xiiso leh.Waa wax lagu farxo.Waa guul u soo hoyatay soomaalida reer Yurub.Waa wax loo dabaal dago sanad guuro kastaba.Kolba ILKIHII u soo bixi mahayaan RAGGII uu Qaadku ilkaha ka saaray,laakiin Qiil ma loo hayaa XAASASKII uu qaadku kala diray?Wadaadadu xaasaskii kala carooday kitaabka ha u FUREEN.Insha Allaah dadkii ka shaqeeyey joojinta qaadka iyo kuwii ku caaweyeyba (U saxiixay) Rabbi (swt) khayr iyo ajar badan ha wada siiyo.
Diseenbar 11, 2011 at 2:05 pm
qaadka hadii nala ka joojiyo maxaan cunaynayaaa war naga taga niman yahow naag baan ku waala naynaa hadii aan joojino qaadka waa nin jooga wadanka uk oo aad u taageersan dar dar galinta cunista qaadka iyo sidii wadanka qaad aad u fara badan oo ka badan kan hada la keeno tan ahaan iyo miisaan ahaan loo keeni lahaa nabad galyo ciwaankeyga iyo magaceyga waan ka gaabsadey magac been abuur ah baana adeeg sadey laakin dad badan hadalkaga yaqaan way i garanayaan nin kaan ahay xaafada dhanka bari ee london ayaana daganahay
Diseenbar 19, 2011 at 7:06 pm
dhammanwaxaa salamayaa dadka fikirkanwada ama soo tallo
jeediyey ama ururada isku tagey hattaa.
sabab udhahay in la joojin waxa dhici karta in dhibka ba
dan keeno joojintiisa tusaalle dadka cunna jaadka waxaa
jira dad cunayey muddo 25sano, ama badan wallow xadkood
a, waa dhaafen waxay ku dareen qamri iyo wax kale, midd
a kale waa sun dhexgashay jirkooda, waxaa dhacda in wax
dileen ama iyaga laftooda dilan midda kale waxa dhacda,
in UK poliska iyo shacabka wadankan ,in dhib ukenan.
waxa ku talinayaa in awalan dadka cunin la siiyo tallo
wanagsan iyo xaasaska isguursan rabba waxaa wanagsan in iska ilaaliyaan oo nin jaadh cuno la guursan, ama waalid
ka soomaaliyeed waa in waaniyan ilmaha cunna ama waalidk
a, cunna jaadka hooyo iyo aabe waa in iyaga iswaaniyan.
waa in hoos laga soo billo inta wax la joojin.
midda kale soomaali kama jirto dowlad waxqabaneysa ama
dadka lagu soo dhaqanceliyo waa isku xirantahay nidaamk
a, soomaalia iyo jaadka.
waalidka cunna jaadka waa in dadaal sameeyan.
midda kale haweenka guursanaya nimanka cunna jaadka waa
in ka cabaadin dulqatan.
sidoo kale ragga guursanaya kuwa leh barwad jaad waa in
burhan yusuf hersi says:
Diseenbar 19, 2011 at 7:08 pm
Asc dhamaantin walayal waa wax lagu farxo la dagaalanka maandooriyaha dhibaatada faraha badan ku haya dhamaan umada soomaliyeed waxaa aad ugu baahan in laga joojiyo kan dhaqaalaha ka dhameeyey umadayada iyo wadankayaga waana ku taagersanahay cid kastoo ka soo horjeesanta…